Maleysia oo ka fiirsaneysa in dalkeeda ay ka masaafuriso Shiik... | Universal Somali TV
Maleysia oo ka fiirsaneysa in dalkeeda ay ka masaafuriso Shiikh Zakir Naik
Golaha wasiirada Malaysia ayaa ka munaaqashooday in wadaadka Hindiga ah ee lagu magacaabo Zakir Naik lagala laabto aqoonsiga deganaasho kadib markii ay ku eedeeyeen in uu kala qeybinayo qowmiyadaha ku nool dalkaan dhaca koonfurta Aasiya.
Shiikh Naik oo sadexdii sano si deganaasho ah ugu noolaa Maleysia ayaa la kulmay dhaleeceyn kadib markii uu sheegay in qowmiyada Hinduu-ga ah ee ku soo jeeda Maleysia 100 jeer aysan ku xuquuq noqon karin Muslimiinta laga tirada badan yahay ee Hindiya.
Wuxuu tusaale u soo qaatay in dalka Hindiya aysan isku mid aheyn muslimiinta iyo Hinduuga sida ay aaminsan tahay dowlada Delhi, si la mid ahna uu isagu qabo in Hinduuga maleysia aysan la mid noqon karin muslimiinta laga tirada badan yahay ee Hindiya.
Maleysia oo dadkeeda lagu qiyaaso 32 million ayaa boqolkiiba lixdan ah dad muslimiin ah oo heybtoodu tahay badi Shiinees iyo Hindi, halka inta kale ay u yihiin dadka Hinduuga.
Marka loo eego sharciga u yaal dalkaan ku yaal qaarada koonfureed ee aasiya ayaa waxaa ka mamnuuc ah loolan Diimaha.
Waxaan ka walaacsanahay hadalka ka soo yeeray Zakir Naik, waana in talaabo laga qaado oo aan loo ogolaan in uu halkaan sii joogo, sidaasi waxaa sheegay arbacada maanta ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Malaysia Gobind Singh Deo.
Wasiirka shaqada M Kulasegaran ayaa isna tilmaamay in hadalada shiikh Naik ay abuuri karaan naceyb iyo in uu soo jiito quluubta muslimiinta taasi oo dhibaato u keeni karta shacabka Maleysia.
Balse Ra'isul wasaaraha Maleysia Mahathir Maxamed ayaa talaadada ee shalay sheegay in aysan suura gal aheyn in Zakir Naik laga tarxiilo Maleysia maadama ay jirto cabsi ah in dowlada Hindiya ay dili Karto.
Mr Maxamed ayaa dhanka kale sheegay hadii uu jiro dal kale oo magangelyo siin kara wadaadkaan ay diyaar u Yihiin.
Kan-xigaSacuudiga oo looga digay dilka wadaad...
Kan-horeXildhibaan Ducaale oo sheegay in siya...
50,443,818 unique visits